အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) – For her myanmar
အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
Posted on May 27, 2019 Author For Her Myanmar	Comment(0)
ကိုယ့်အနားမှာ ဟန်နီရှိနေရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ဘာစကားမှမပြောလည်းရတယ်။ အရင်လို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဂရုတစိုက်မရှိရင်လည်းရတယ်။ ကိုယ့်အနားကတော့ ထွက်မသွားပါနဲ့…
ဧက အခုရက်ပိုင်း အစားအသောက်မမှန် အအိပ်မမှန်ဖြစ်နေသည်။ ဟန်နီ့ကို လုံးဝဆက်သွယ်၍ မရသည့်အပြင် ဟန်နီ့အိမ်ကို လိုက်သွားတော့လည်း သော့ခတ်ထားတာချည်းကြုံနေရသည်မှာ ၃ ရက်ရှိပြီ။ အိမ်ပြောင်းသွားတာလား ခရီးသွားကြတာလား မသေချာ။ ဟန်နီ့ကိုတွေ့ချင်စိတ်တွေများနေသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ ဟန်နီ့ကို မြင်နေရသလိုတောင် ဖြစ်နေသည်။ စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်ရသည်မှာလည်း အဆင်မပြေမှုတို့များသည့်အပြင် လုပ်ချင်စိတ်မရှိသောကြောင့် “အနုပညာအလုပ်များကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကြောင့် ခဏနားသည်”ဟု မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ကြေညာထားသည်။
ခဏလေးအိပ်လိုက်တာနှင့် အဖေနဲ့အမေရန်ဖြစ်တဲ့ညကို အိပ်မက်မက်သည်။ တံတားရှည်ကြီးပေါ်က ဟန်နီ ထားသွားသည့် အိပ်မက်မက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိပ်ရမှာကြောက်လာသည်။ မအိပ်ဘဲ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဟန်နီ့ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်သည်။ ပို့ထားသော message များကိုဖတ်သည်။ ဟန်နီ့ကို သူလုံးဝ မစွန့်လွှတ်နိုင်။ ဟိုလူ့လက်ထဲလည်း အပါမခံနိုင်။ ဟန်နီ့ကို သူ ရအောင်ယူရပေမည်။
ဟန်နီ ကလောကို အလုပ်ကိစ္စနှင့်သွားတော့ မာမီပါ လိုက်လာသည်။ အလုပ်ပြီးတော့ မာမီရယ် ယမုံရယ် ဟန်နီရယ် တောင်ကြီး အင်းလေးဘက်ပါ အလည်သွားရင်း ခရီးက နှစ်ပတ်လောက်ကြာသွားသည်။ နှစ်ပတ်လုံး ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီး မည်သူနှင့်မှ အဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဟန်နီ့စိတ်က တော်တော်အနည်ထိုင်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဧက အနုပညာအလုပ်များ နားလိုက်သည့်သတင်းကိုတော့ ယမုံပြောပြ၍ သိလိုက်ရသည်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သည့်အချိန်တွင် ဟန်နီက အလုပ်ကို ပုံမှန်ဆက်လုပ်နေပြီး ဧက၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို blacklist ထည့်ထားလိုက်သည်။ ယမုံကလည်း ဟန်နီ့အနားမှာအမြဲမပြတ် အဖော်လုပ်ပေးနေခဲ့သည်။ အချိန်သည် အကောင်းဆုံးသော သမားတော်ပင် မဟုတ်ပါလား…
ဒီတစ်ခေါက် ဟန်နီသွားရမည့် ပါတီပွဲသည် ဧကနှင့် ပထမဆုံးဆုံခဲ့သည့် ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ညဘက်လုပ်သောကြောင့် ယမုံက ဟန်နီနှင့်အတူ ပါတီပွဲထဲအထိ လိုက်ဝင်ခဲ့သည်။ ပြာလဲ့လဲ့ အရည်ကြည်လေးများ ထည့်ထားသော ခွက်ကလေးများကို မြင်တော့ ဧကကို သတိရမိသေးသည်။ ဟန်နီက ပါတီပွဲတွေကို သိပ်မကြိုက်တာကြောင့် စောစော ပြန်လေ့ရှိသည့်အတိုင်း သူများတွေမပြန်ခင် ယမုံနဲ့ ဟန်နီ ကားပါကင်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။
ကားပါကင်ကိုရောက်သည့်အခါ ဟန်နီက ရှေ့မှသွားပြီး ယမုံက ဟန်နီ့နောက်ကနေလိုက်လာသည်။ ဟန်နီကားနားကို ရောက်တော့ ယမုံ့ကို ကားသော့ဖွင့်ဖို့ပြောရန် လှည့်လိုက်စဉ် ဒုတ်ခနဲ အသံနှင့်အတူ ခေါင်းတစ်ခုလုံးပူထူသွားပြီးနောက် လောကကြီးနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတော့သည်။
ဝင်လေထွက်လေကို ရှူရှိုက်လိုက်တိုင်း လာဗင်ဒါရနံ့တို့ သင်းပျံ့နေသည်။ စေ့ပိတ်နေသောမျက်လုံးများကိုကြိုးစား အားယူ၍ ဖွင့်ရန် ခက်ခဲလှသည်။ မျက်လုံးထဲတွင်သာမက ဦးနှောက်ထဲတွင်ပါ နောက်ကျိထုံဝေနသည်။ တစ်ခါ….နှစ်ခါ…. ကြိုးစားအားယူဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ ပိတ်ထားစဉ်က မှောင်မိုက်နေသောအမြင်အာရုံများသည် ဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်လည်း ထူး၍ လင်းမလာခဲ့ပါ။ တင်းကျပ်စွာ စီးနှောင်ခံထားရသော လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကလည်း စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း။
ကျွီခနဲ တံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ အလင်းရောင်တန်းလေးတစ်ခု အခန်းထဲ ဝင်လာသည်။ ခေါင်းကို မာကျောသောအရာတစ်ခုနှင့် ရိုက်ချခံလိုက်ရပြီး တစ်ဖန်ပြန်လည် မေ့မြောမသွားမီ နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရသည်က တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ကျေနပ်စွာ ပြုံးနေသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံပင်။
ဧက ပုံလျက်သားလဲနေသော ဟန်နီ့အနားတွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။ အခုချိန်မှာ ဧကသည် တစ်လောကလုံးကိုပိုင်ဆိုင် ထားရသလိုပင် ကျေနပ်နေသည်။ ဟန်နီ သူ့ဘေးတွင်ရှိနေလျှင် အရာအားလုံးပြည့်စုံသည်။ အရင်လို ဟန်နီနှင့် စကားတွေ အများကြီးပြောချင်သည်။ သို့သော် ဟန်နီသတိရလာသည့်အခါ သူ့ကိုစိတ်ဆိုးမှာ မုန်းသွားမှာ ရင့်သီးသော စကားများပြောမှာကို ကြောက်နေမိသည်။
“ဟန်နီ ဟန်နီ ဒီအတိုင်းလေး မေ့နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်ကွာ… ကိုယ့်အနားမှာ ဟန်နီရှိနေရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ဘာစကားမှမပြောလည်းရတယ်။ အရင်လို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဂရုတစိုက်မရှိရင်လည်းရတယ်။ ကိုယ့်အနားကတော့ ထွက်မသွားပါနဲ့”
ဧက စကားတွေ တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ဟန်နီ့ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်။ ဟန်နီ မင်းရှိရင် ကို့ဘဝက ပြည့်စုံပြီ။
ယမုံ မျက်လုံးများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဖြူလွလွ မျက်နှာကြက်ကိုမြင်ရသည်။ မီးတွေလည်း ဖွေးနေအောင် ဖွင့်ထားသည်။
အသံကြားတာနှင့် ဟန်နီ့မာမီမှန်း ယမုံသိလိုက်သည်။ အဲဒီနောက် ဒေါက်တာဇွဲသစ်အသံကြားလိုက်ရသည်။
“မယမုံ သတိရပြီလား ဘယ်လိုနေသေးလဲ နေလို့ကောင်းရဲ့လား မသက်သာတာများရှိရင် ပြောနော်”
“ယမုံ ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ဒေါက်တာ”
“ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုပါ… မယမုံကို (…) ဟိုတယ်ရဲ့ ကားပါကင်မှာ လဲကျနေတာတွေ့လို့ ဆေးရုံပို့ပေးခဲ့ကြတာ”
ယမုံ ညကအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်သတိရသွားသည်။ ဘယ်သူမှန်းမသိ နောက်ကနေ ရိုက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လေ…
“ဒါနဲ့ ဟန်နီ ဟန်နီရော…’’
“မမေကိုလည်း လူပျောက်တိုင်ထားပြီးပါပြီ ကားပါကင်ရဲ့ CCTV ကို စစ်လိုက်တော့ မယမုံကိုရော၊ မမေကိုပါ ရိုက်လိုက်တာ ဧကသုဖြစ်နေတယ်… ပြီးတော့ မမေကို ကားပေါ်တင်ခေါ်သွားတယ်”
“ည ၁၁ နာရီခွဲပါ”
“ဟန်နီ့ကို တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရင် ဒုက္ခပါပဲ။ လူပျောက်က ဘယ်တုန်းက တိုင်တာလဲဟင်”
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နာရီလောက်ကပါ… မယမုံတို့ ကားပါကင်ကို ရောက်တာ ၁၀ နာရီကျော်လောက်လေ ပါတီက ပြန်တဲ့သူတွေ မမေကိုတွေ့တာက ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှ တွေ့တာ… မယမုံကို ရိုက်တာသိပ်မပြင်းလို့ တော်သေးတာပေါ့”
ယမုံ စိတ်ပူသလို မာမီရော ဇွဲသစ်ပါစိတ်ပူနေသည်။ သက်ဆိုင်ရာကို သေချာအကြောင်းကြားထားသော်လည်း အချိန်မီ မကယ်နိုင်လိုက်မှာကို စိတ်ပူနေရသည်။ ဘုရား တရား မ လို့ ဟန်နီ ဘေးမသီရန်မခဘဲ ပြန်ရောက်လာပါစေ။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၁၀)
ဧကနေသော ကွန်ဒို၏ အောက်တွင် တာဝန်ရှိသူများရောက်နေပြီး ကွန်ဒိုက လုံခြုံရေးမှူးထံမှ ဧက၏ အခန်းသော့ကို တောင်းယူလိုက်ကြသည်။ ဧက အခန်းရှိသော ၁၀ ထပ်ကို တက်လာခဲ့ပြီး အခန်းရှေ့က လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်လိုက်သည်။ အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ ဘာတုံ့ပြန်မှုမှ မရှိသောကြောင့် အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ အခန်းထဲတွင် လာဗင်ဒါရနံ့များ ထုံသင်းမွှေးပျံ့နေသည်။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် မီးချောင်းထွန်းမထားဘဲ နံရံကပ် မီးလေးများသာ ထွန်းထားသောကြောင့် မှုန်ပြပြအလင်းရောင်သာ မြင်ရသည်။ နံရံက မီးခလုတ်ကို စမ်းပြီးဖွင့်လိုက်မှ တစ်ခန်းလုံးကို သဲသဲ ကွဲကွဲမြင်ရသည်။ မှန်ချပ်ကြီးများဘက်သို့ လှည့်ကာချထားသော ထိုင်ခုံ ၂လုံးနှင့် ကော်ဖီအိုးတင်ထားသော စားပွဲမြင့်လေးတစ်လုံးဆီသို့ ရဲတစ်ဦးက သွားကြည့်သည်။
“ကော်ဖီတွေက ပူနေတုန်းပဲ ဖျော်ထားတာ သိပ်ကြာသေးပုံမရဘူး”
“ရှိသမျှအခန်းတွေအကုန် နှံ့စပ်အောင် ရှာကြ”
ရဲအုပ်ကျော်စိုး အမိန့်ပေးလိုက်တော့ အားလုံးက ဧကသုရဲ့ အခန်းကို ရှာကြသည်။ အိပ်ခန်း၊ အဝတ်လဲခန်းနှင့် မီးဖိုခန်းဘက်တွင် ထူးခြားသော အရိပ်အယောင် ဘာမှမတွေ့ရ။
အားလုံးက အသံလာရာ စာကြည့်ခန်းဘက်ကို သွားကြည့်ကြသည်။ ပြိုလဲနေသောထိုင်ခုံ၊ ကြိုးခွေတစ်ခုနှင့် သွေးစွန်းနေသော တုတ်တစ်ချောင်းကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ဟန်နီမေကို ဒီအခန်းထဲမှာ ချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ရမယ်… ဒီပုံစံအတိုင်းဆို ဟန်နီမေကို ဒီကနေခေါ်ထုတ်သွားတာ သိပ်မကြာလောက်သေးဘူး.. အခုချက်ချင်းလိုက်ရင် မီနိုင်သေးတယ်… ဧကသုရဲ့ ကားနံပါတ်နဲ့ ခြေရာခံမယ်… တစ်ဖွဲ့က ကွန်ဒိုအောက်က CCTV ခန်းကို သွားပြီး ကားပါကင်ရဲ့ CCTV ကိုကြည့်ပါ”
ကွန်ဒို CCTV မှ ဧကရဲ့ ကားထွက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရပြီးနောက် ကားနံပါတ်ကို အခြားနယ်မြေမှ ရဲဌာနများဆီ သတင်းပို့ထားလိုက်သည်။ မကြာမတင်မှာပင် ဧကရဲ့ကားကို ခြေရာခံမိပြီး နီးစပ်ရာနယ်မြေရဲစခန်းက နောက်က လိုက်တော့သည်။
ဧက ကားမောင်းရင်း နောက်က ရဲကားသံများကြောင့် တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ကာ ပြုံးလိုက်သည်။ ဟန်နီနှင့် နေထွက်ချိန်ကြည့်ရင်း ကော်ဖီအတူသောက်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် မှန်ချပ်များမှ တစ်ဆင့် ရဲကားများကို မြင်လိုက်သောကြောင့် အချိန်မီ ရှောင်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ရဲများက စောစီးစွာ သူ့ကို ခြေရာခံမိပြီးသား ဖြစ်နေသည်။ ည ၁၂ နာရီထိုးနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် ကားများရှင်းနေသည်။ ဧက ကားကို အရှိန်အမြင့်ဆုံး တင်လိုက်သည်။ ရဲကားများလည်း ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်လာသည်။ ဧက ကားကိုမြန်မြန်မောင်းပြီး ရဲများကို မျက်ခြေဖြတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ လမ်းလေးခွဆုံသည့်နေရာတွင် ညာဘက်အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြတ်အကွေ့ ယာဉ်လမ်းကြောချော်သွားပြီး ဘေးဖက်မှ ပလက်ဖောင်းကို အရှိန်နှင့် ဝင်တိုက်မိတော့သည်။
ဧက ကားနောက်မှ ပါလာသော ရဲကားများက ဧကရဲ့ကားကို ဝိုင်းပြီး ရပ်လိုက်ကြသည်။ ဧကရဲ့ကားရှေ့ပိုင်းတစ်ခုလုံး မွမွကြေနေပြီဖြစ်သည်။ ရှေ့ခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး သွေးအလိမ်းလိမ်းဖြစ်နေသော ဧကကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကားနောက်ခန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိဘဲရှင်းလင်းနေသည်။ ကားနောက်ဖုံးကို ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း ဘာမှမရှိ။
“သူ ဒီကိုမလာခင် ဟန်နီမေကို တစ်နေရာရာမှာ ဝှက်ထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဧကသု ရဲ့ကွန်ဒိုအနီးတစ်ဝိုက်ကို သေချာပြန်စစ်ဆေးဖို့ ရဲအုပ်ကျော်စိုးကို သတင်းပို့ပါ ဧကသုကို လူနာတင်ကားအမြန်ဆုံးခေါ်ပြီးဆေးရုံပို့ပါ”
ဧကသုကား accident ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကားပေါ်တွင် ဟန်နီမေပါမလာကြောင်းသတင်းရတော့ ရဲအုပ်ကျော်စိုးတို့အဖွဲ့အလုပ်ရှုပ်သွားပြန်သည်။ ဧကသုနောက်ကိုလိုက်နေရင်းမှကားပြန်လှည့်ကာ ကွန်ဒိုကိုပြန်သွားရသည်။ ကွန်ဒိုလုံခြုံရေးခန်းက CCTV မှတစ်ဆင့် ဧကသုနေသောအထပ်က CCTV ကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဟန်နီမေကိုပွေ့ချီပြီးထွက်လာကာ ဓာတ်လှေကားနှင့်အပေါ်သို့တက်သွားပုံ အပေါ်ကနေ ဟန်နီမေမပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း ကားပါကင်အထိ ဆင်းလာပုံတို့ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ဒါဆို ဟန်နီမေက ဒီကွန်ဒိုရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ရှိလောက်တယ် သွားစို့”
ရဲအုပ်ကျော်စိုးနှင့်အဖွဲ့က ကွန်ဒိုရဲ့ အပေါ်ဆုံးကို ဓာတ်လှေကားနှင့် အမြန်ဆုံးတက်ခဲ့သည်။ ကွန်ဒိုအပေါ်ဆုံးက တံခါးကို တွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ မြက်ခင်းစိမ်းလေးများ ပန်းပင်လေးများဖြင့် ခေါင်မိုးထပ်ဥယျာဉ်လေးကို တွေ့ရသည်။ ခေါင်မိုးထပ်တွင်လူဖြန့်ပြီးရှာလိုက်ရာ ပန်းရုံနောက်ဘက်တွင် သတိလစ်မေ့မြောနေသော ဟန်နီမေကို တွေ့ရပြီး ဆေးရုံသို့ပို့ပေးလိုက်ကြသည်။
ဟန်နီ သတိပြန်ရလာတော့ အခန်းထဲတွင် မာမီ ယမုံနှင့် ဒေါက်တာဇွဲသစ်တို့အပြင် ရဲများပါ ရှိနေသည်။
ဟန်နီ ခေါင်းကို အသာညိတ်ပြလိုက်သည်။
“ကျွန်တော် ရဲအုပ်ကျော်စိုးပါ။ မဟန်နီမေကို မေးခွန်းလေး နည်းနည်းလောက် မေးခွင့်ပြုပါ”
ရဲအရာရှိက ဟန်နီနှင့် ဧက တို့ရဲ့ ပတ်သက်မှုကို သေချာစစ်မေးပြီးနောက်…
“ကိုဧကသုက ကား accident ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံပို့ပေးထားတယ် မဟန်နီမေ သတိမရခင် နာရီပိုင်းလောက်က သူသတိရလာလို့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို စစ်ဆေးစရာရှိသမျှ စစ်ဆေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီက ဒေါက်တာက ပြောပြပါလိမ့်မယ်”
“ဆရာတို့ရဲ့ စစ်ဆေးချက်အရတော့ မောင်ဧကသုမှာ စိတ်ရောဂါရှိကြောင်း ပေါ်လွင်တယ်… ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာအသေးအမွှားလေးတွေက စုပြုံပြီး ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ သဘောပေါ့ သူ့မိဘတွေက တစ်ချိန်လုံး ရန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကို မြင်ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစိတ်က ဝင်နေတယ်…အဲ့ဒီမှာ သူကိုယ်တိုင် ရည်းစားထားတဲ့အချိန်ကျတော့ အဲဒီမသိစိတ်မှာ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေက သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ သူ့ကိုစိုးမိုးနေတာ… တကယ်တော့ သူက သမီးကို သိပ်ချစ်လို့ မှားသွားတာပါ သူ့အချစ်ကို နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ မေပြနိုင်ခဲ့လို့ပေ့ါ… ဒီကိစ္စကို လက်ရောက်မှုအနေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း သူဟာ စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို အခုပို့ထားပါတယ်”
ဒေါက်တာက ရှည်လျားစွာ ရှင်းပြသွားသည်။ ဟန်နီ့စိတ်တွင်တော့ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ စိတ်ရော၊ လူရော ပင်ပန်းရသမျှ ဒီမျှနဲ့တင် ပြီးပါစေတော့လို့သာ ဆုတောင်းနေမိတော့သည်။
ဧက၏ စိတ်အခြေအနေ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်လာသောကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံတွင်အပြီးထားလိုက်သည်။ ဟန်နီ ဆေးရုံကဆင်းလာပြီးနောက် ဒေါက်တာဇွဲသစ်က ဟန်နီ့ဆီ မကြာခဏလာလည်သည်။ ဟန်နီလည်း ကျန်းမာရေးကြောင့် အနုပညာအလုပ်များကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်သည်။
“ကောင်းပါတယ် ဒေါက်တာ.. နေ့တိုင်း ဟန်နီ့ကို လာကြည့်ရတာ အလုပ်ရှုပ်နေပြီ”
“မရှုပ်ပါဘူး မမေ… ကျွန်တော်က ဒီလိုအခွင့်အရေးရတာကိုပဲ ကျေနပ်နေတဲ့သူပါ”
“မမေ… အခွင့်အရေးယူတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူး။ ဖျာခင်းတယ်လို့လည်းမထင်စေချင်ပါဘူး… မမေရဲ့နှလုံးသားက တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့များ အဆင်သင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုစဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ် မမေရင်ထဲမှာ နာကျင်ခဲ့ရသမျှကို ကျွန်တော် ကုစားပေးပါရစေ”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာ… ဟန်နီ့ကို အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက်ပါ… ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာရယ် စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဝါသနာတူ ချစ်ခဲ့ကြတဲ့လူချင်းတောင်မှ နောက်ဆုံးမှာ ဟန်နီ့စိတ်ရော ကိုယ်ရောကို ဒဏ်ရာတွေ ပေးခဲ့တယ် ဟန်နီ့နှလုံးသားက အမှတ်ကြီးတယ် ဒေါက်တာ….. နောက်ထပ် ထပ်မချစ်ရဲတော့ဘူး ချစ်လည်း မချစ်ချင်တော့ပါဘူး ဟန်နီ အားနာပါတယ်”
ကျောခိုင်းပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားသော ဟန်နီ့ကျောပြင်ကို ဇွဲသစ်ငေးကြည့်နေမိသည်။ မမေ အချစ်က အစွမ်းကုန် ပွင့်ဖူးပြီးမှ နွမ်းကြေသွားတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်ကတော့ ပွင့်ဖူးခွင့်လေးတောင်မရလိုက်ဘဲ ခြွေချခံလိုက်ရတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ မမေကို အမြဲစောင့်နေပါ့မယ်။ မမေ ဘဝမှာ ဒဏ်ရာအနာတရတွေကို မေ့လောက်ပြီး အချစ်သစ်တွေ ပြန်လည်မွေးဖွားလာနိုင်မယ့်နေ့ကို စောင့်နေပါ့မယ် မမေ။
အချစ်တွင် အလင်းနှင့်အမှောင်ဟူ၍ နှစ်ခြမ်းရှိသည်။ သန့်စင်နွေးထွေးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာရိပ်အောက်တွင် ခိုလှုံခွင့်ရသူများသည် အချစ်၏ လင်းလက်သောဘက်ခြမ်းတွင် နေထိုင်ခွင့်ရသူများဖြစ်သည်။ နာကျင်စက်ဆုပ်စရာများ ပြည့်နှက်နေသော အချစ်ကွန်ရက်တွင် တွယ်ငြိမိသူများသည် အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်းတွင် ပိတ်လှောင်ခံထားရသူများသာဖြစ်သည်။
အချစ်၏ နူးညံ့နွေးထွေးမှုများဖြင့် အစွမ်းကုန်ပွင့်လန်းရန် အားယူထားသော ဟန်နီမေ၏ အချစ်ပန်းလေးသည် ဧကသု၏ မေတ္တာအဆိပ်သင့်မှုအောက်တွင် ရစရာမရှိအောင် ကြေကွဲပျက်သုဉ်းခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ဇွဲသစ်၏ အေးချမ်းသော မေတ္တာဓာတ်နှင့် အချစ်၏ လင်းလက်တောက်ပသောအခြမ်းတွင် ဟန်နီ၏အချစ်ပန်းလေး နောက်တစ်ကြိမ်ဖူးပွင့်ခွင့်ရရန် အချိန်ယူရပေဦးမည်။
ကိုယျ့အနားမှာ ဟနျနီရှိနရေငျ ကနြေပျပါပွီ။ ဘာစကားမှမပွောလညျးရတယျ။ အရငျလို ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ဂရုတစိုကျမရှိရငျလညျးရတယျ။ ကိုယျ့အနားကတော့ ထှကျမသှားပါနဲ့…
ဧက အခုရကျပိုငျး အစားအသောကျမမှနျ အအိပျမမှနျဖွဈနသေညျ။ ဟနျနီ့ကို လုံးဝဆကျသှယျ၍ မရသညျ့အပွငျ ဟနျနီ့အိမျကို လိုကျသှားတော့လညျး သော့ခတျထားတာခညျြးကွုံနရေသညျမှာ ၃ ရကျရှိပွီ။ အိမျပွောငျးသှားတာလား ခရီးသှားကွတာလား မသခြော။ ဟနျနီ့ကိုတှခေ့ငျြစိတျတှမြေားနသေောကွောငျ့ တဈခါတဈခါ ဟနျနီ့ကို မွငျနရေသလိုတောငျ ဖွဈနသေညျ။ စိတျနဲ့လူနဲ့ မကပျသောကွောငျ့ အလုပျလုပျရသညျမှာလညျး အဆငျမပွမှေုတို့မြားသညျ့အပွငျ လုပျခငျြစိတျမရှိသောကွောငျ့ “အနုပညာအလုပျမြားကို ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စကွောငျ့ ခဏနားသညျ”ဟု မီဒီယာမှတဈဆငျ့ ကွညောထားသညျ။
ခဏလေးအိပျလိုကျတာနှငျ့ အဖနေဲ့အမရေနျဖွဈတဲ့ညကို အိပျမကျမကျသညျ။ တံတားရှညျကွီးပျေါက ဟနျနီ ထားသှားသညျ့ အိပျမကျမကျသညျ။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ အိပျရမှာကွောကျလာသညျ။ မအိပျဘဲ နစေ့ဉျရကျဆကျ ဟနျနီ့ဓာတျပုံမြားကို ကွညျ့သညျ။ ပို့ထားသော message မြားကိုဖတျသညျ။ ဟနျနီ့ကို သူလုံးဝ မစှနျ့လှတျနိုငျ။ ဟိုလူ့လကျထဲလညျး အပါမခံနိုငျ။ ဟနျနီ့ကို သူ ရအောငျယူရပမေညျ။
ဟနျနီ ကလောကို အလုပျကိစ်စနှငျ့သှားတော့ မာမီပါ လိုကျလာသညျ။ အလုပျပွီးတော့ မာမီရယျ ယမုံရယျ ဟနျနီရယျ တောငျကွီး အငျးလေးဘကျပါ အလညျသှားရငျး ခရီးက နှဈပတျလောကျကွာသှားသညျ။ နှဈပတျလုံး ဖုနျးကိုပိတျထားပွီး မညျသူနှငျ့မှ အဆကျအသှယျမလုပျခဲ့သောကွောငျ့ ဟနျနီ့စိတျက တျောတျောအနညျထိုငျနခေဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ဧက အနုပညာအလုပျမြား နားလိုကျသညျ့သတငျးကိုတော့ ယမုံပွောပွ၍ သိလိုကျရသညျ။
ရနျကုနျပွနျရောကျသညျ့အခြိနျတှငျ ဟနျနီက အလုပျကို ပုံမှနျဆကျလုပျနပွေီး ဧက၏ ဖုနျးနံပါတျကို blacklist ထညျ့ထားလိုကျသညျ။ ယမုံကလညျး ဟနျနီ့အနားမှာအမွဲမပွတျ အဖျောလုပျပေးနခေဲ့သညျ။ အခြိနျသညျ အကောငျးဆုံးသော သမားတျောပငျ မဟုတျပါလား…
ဒီတဈခေါကျ ဟနျနီသှားရမညျ့ ပါတီပှဲသညျ ဧကနှငျ့ ပထမဆုံးဆုံခဲ့သညျ့ ဟိုတယျတှငျ ကငျြးပမညျဖွဈသညျ။ ထုံးစံအတိုငျး ညဘကျလုပျသောကွောငျ့ ယမုံက ဟနျနီနှငျ့အတူ ပါတီပှဲထဲအထိ လိုကျဝငျခဲ့သညျ။ ပွာလဲ့လဲ့ အရညျကွညျလေးမြား ထညျ့ထားသော ခှကျကလေးမြားကို မွငျတော့ ဧကကို သတိရမိသေးသညျ။ ဟနျနီက ပါတီပှဲတှကေို သိပျမကွိုကျတာကွောငျ့ စောစော ပွနျလရှေိ့သညျ့အတိုငျး သူမြားတှမေပွနျခငျ ယမုံနဲ့ ဟနျနီ ကားပါကငျသို့ ဆငျးလာခဲ့သညျ။
ကားပါကငျကိုရောကျသညျ့အခါ ဟနျနီက ရှမှေ့သှားပွီး ယမုံက ဟနျနီ့နောကျကနလေိုကျလာသညျ။ ဟနျနီကားနားကို ရောကျတော့ ယမုံ့ကို ကားသော့ဖှငျ့ဖို့ပွောရနျ လှညျ့လိုကျစဉျ ဒုတျခနဲ အသံနှငျ့အတူ ခေါငျးတဈခုလုံးပူထူသှားပွီးနောကျ လောကကွီးနှငျ့ အဆကျအသှယျပွတျသှားတော့သညျ။
ဝငျလထှေကျလကေို ရှူရှိုကျလိုကျတိုငျး လာဗငျဒါရနံ့တို့ သငျးပြံ့နသေညျ။ စပေိ့တျနသေောမကျြလုံးမြားကိုကွိုးစား အားယူ၍ ဖှငျ့ရနျ ခကျခဲလှသညျ။ မကျြလုံးထဲတှငျသာမက ဦးနှောကျထဲတှငျပါ နောကျကြိထုံဝနေသညျ။ တဈခါ….နှဈခါ…. ကွိုးစားအားယူဖှငျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ ပိတျထားစဉျက မှောငျမိုကျနသေောအမွငျအာရုံမြားသညျ ဖှငျ့လိုကျသောအခါတှငျလညျး ထူး၍ လငျးမလာခဲ့ပါ။ တငျးကပျြစှာ စီးနှောငျခံထားရသော လကျကောကျဝတျနှဈဖကျကလညျး စပျဖဉျြးဖဉျြး။
ကြှီခနဲ တံခါးဖှငျ့သံနှငျ့အတူ အလငျးရောငျတနျးလေးတဈခု အခနျးထဲ ဝငျလာသညျ။ ခေါငျးကို မာကြောသောအရာတဈခုနှငျ့ ရိုကျခခြံလိုကျရပွီး တဈဖနျပွနျလညျ မမွေ့ောမသှားမီ နောကျဆုံးမွငျလိုကျရသညျက တဈစုံတဈယောကျ၏ ကနြေပျစှာ ပွုံးနသေော နှုတျခမျးတဈစုံပငျ။
ဧက ပုံလကျြသားလဲနသေော ဟနျနီ့အနားတှငျ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ အခုခြိနျမှာ ဧကသညျ တဈလောကလုံးကိုပိုငျဆိုငျ ထားရသလိုပငျ ကနြေပျနသေညျ။ ဟနျနီ သူ့ဘေးတှငျရှိနလြှေငျ အရာအားလုံးပွညျ့စုံသညျ။ အရငျလို ဟနျနီနှငျ့ စကားတှေ အမြားကွီးပွောခငျြသညျ။ သို့သျော ဟနျနီသတိရလာသညျ့အခါ သူ့ကိုစိတျဆိုးမှာ မုနျးသှားမှာ ရငျ့သီးသော စကားမြားပွောမှာကို ကွောကျနမေိသညျ။
“ဟနျနီ ဟနျနီ ဒီအတိုငျးလေး မနေ့တောပဲ ကောငျးပါတယျကှာ… ကိုယျ့အနားမှာ ဟနျနီရှိနရေငျ ကနြေပျပါပွီ။ ဘာစကားမှမပွောလညျးရတယျ။ အရငျလို ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ဂရုတစိုကျမရှိရငျလညျးရတယျ။ ကိုယျ့အနားကတော့ ထှကျမသှားပါနဲ့”
ဧက စကားတှေ တတှတျတှတျပွောရငျး ဟနျနီ့ကိုယျလုံးလေးကို ပှဖေ့ကျထားလိုကျသညျ။ ဟနျနီ မငျးရှိရငျ ကို့ဘဝက ပွညျ့စုံပွီ။
ယမုံ မကျြလုံးမြားကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဖွူလှလှ မကျြနှာကွကျကိုမွငျရသညျ။ မီးတှလေညျး ဖှေးနအေောငျ ဖှငျ့ထားသညျ။
အသံကွားတာနှငျ့ ဟနျနီ့မာမီမှနျး ယမုံသိလိုကျသညျ။ အဲဒီနောကျ ဒေါကျတာဇှဲသဈအသံကွားလိုကျရသညျ။
“မယမုံ သတိရပွီလား ဘယျလိုနသေေးလဲ နလေို့ကောငျးရဲ့လား မသကျသာတာမြားရှိရငျ ပွောနျော”
“ယမုံ ဘယျရောကျနတောလဲ ဒေါကျတာ”
“ကြှနျတျောတို့ဆေးရုံကိုပါ… မယမုံကို (…) ဟိုတယျရဲ့ ကားပါကငျမှာ လဲကနြတောတှလေို့ ဆေးရုံပို့ပေးခဲ့ကွတာ”
ယမုံ ညကအဖွဈအပကျြကို ပွနျသတိရသှားသညျ။ ဘယျသူမှနျးမသိ နောကျကနေ ရိုကျခလြိုကျခွငျးဖွဈသညျလေ…
“ဒါနဲ့ ဟနျနီ ဟနျနီရော…’’
“မမကေိုလညျး လူပြောကျတိုငျထားပွီးပါပွီ ကားပါကငျရဲ့ CCTV ကို စဈလိုကျတော့ မယမုံကိုရော၊ မမကေိုပါ ရိုကျလိုကျတာ ဧကသုဖွဈနတေယျ… ပွီးတော့ မမကေို ကားပျေါတငျချေါသှားတယျ”
“ည ၁၁ နာရီခှဲပါ”
“ဟနျနီ့ကို တဈခုခု လုပျလိုကျရငျ ဒုက်ခပါပဲ။ လူပြောကျက ဘယျတုနျးက တိုငျတာလဲဟငျ”
“လှနျခဲ့တဲ့ ၁ နာရီလောကျကပါ… မယမုံတို့ ကားပါကငျကို ရောကျတာ ၁၀ နာရီကြျောလောကျလေ ပါတီက ပွနျတဲ့သူတှေ မမကေိုတှတေ့ာက ၁၀ နာရီခှဲလောကျမှ တှတေ့ာ… မယမုံကို ရိုကျတာသိပျမပွငျးလို့ တျောသေးတာပေါ့”
ယမုံ စိတျပူသလို မာမီရော ဇှဲသဈပါစိတျပူနသေညျ။ သကျဆိုငျရာကို သခြောအကွောငျးကွားထားသျောလညျး အခြိနျမီ မကယျနိုငျလိုကျမှာကို စိတျပူနရေသညျ။ ဘုရား တရား မ လို့ ဟနျနီ ဘေးမသီရနျမခဘဲ ပွနျရောကျလာပါစေ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၁၀)
ဧကနသေော ကှနျဒို၏ အောကျတှငျ တာဝနျရှိသူမြားရောကျနပွေီး ကှနျဒိုက လုံခွုံရေးမှူးထံမှ ဧက၏ အခနျးသော့ကို တောငျးယူလိုကျကွသညျ။ ဧက အခနျးရှိသော ၁၀ ထပျကို တကျလာခဲ့ပွီး အခနျးရှကေ့ လူချေါဘဲလျကို နှိပျလိုကျသညျ။ အခြိနျအတျောကွာသညျအထိ ဘာတုံ့ပွနျမှုမှ မရှိသောကွောငျ့ အခနျးတံခါးကို ဖှငျ့လိုကျသညျ။ အခနျးထဲတှငျ လာဗငျဒါရနံ့မြား ထုံသငျးမှေးပြံ့နသေညျ။ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ မီးခြောငျးထှနျးမထားဘဲ နံရံကပျ မီးလေးမြားသာ ထှနျးထားသောကွောငျ့ မှုနျပွပွအလငျးရောငျသာ မွငျရသညျ။ နံရံက မီးခလုတျကို စမျးပွီးဖှငျ့လိုကျမှ တဈခနျးလုံးကို သဲသဲ ကှဲကှဲမွငျရသညျ။ မှနျခပျြကွီးမြားဘကျသို့ လှညျ့ကာခထြားသော ထိုငျခုံ ၂လုံးနှငျ့ ကျောဖီအိုးတငျထားသော စားပှဲမွငျ့လေးတဈလုံးဆီသို့ ရဲတဈဦးက သှားကွညျ့သညျ။
“ကျောဖီတှကေ ပူနတေုနျးပဲ ဖြျောထားတာ သိပျကွာသေးပုံမရဘူး”
“ရှိသမြှအခနျးတှအေကုနျ နှံ့စပျအောငျ ရှာကွ”
ရဲအုပျကြျောစိုး အမိနျ့ပေးလိုကျတော့ အားလုံးက ဧကသုရဲ့ အခနျးကို ရှာကွသညျ။ အိပျခနျး၊ အဝတျလဲခနျးနှငျ့ မီးဖိုခနျးဘကျတှငျ ထူးခွားသော အရိပျအယောငျ ဘာမှမတှရေ့။
အားလုံးက အသံလာရာ စာကွညျ့ခနျးဘကျကို သှားကွညျ့ကွသညျ။ ပွိုလဲနသေောထိုငျခုံ၊ ကွိုးခှတေဈခုနှငျ့ သှေးစှနျးနသေော တုတျတဈခြောငျးကို တှလေို့ကျရသညျ။
“ဟနျနီမကေို ဒီအခနျးထဲမှာ ခြုပျထားခဲ့တာဖွဈရမယျ… ဒီပုံစံအတိုငျးဆို ဟနျနီမကေို ဒီကနခေျေါထုတျသှားတာ သိပျမကွာလောကျသေးဘူး.. အခုခကျြခငျြးလိုကျရငျ မီနိုငျသေးတယျ… ဧကသုရဲ့ ကားနံပါတျနဲ့ ခွရောခံမယျ… တဈဖှဲ့က ကှနျဒိုအောကျက CCTV ခနျးကို သှားပွီး ကားပါကငျရဲ့ CCTV ကိုကွညျ့ပါ”
ကှနျဒို CCTV မှ ဧကရဲ့ ကားထှကျသှားတာကို မွငျလိုကျရပွီးနောကျ ကားနံပါတျကို အခွားနယျမွမှေ ရဲဌာနမြားဆီ သတငျးပို့ထားလိုကျသညျ။ မကွာမတငျမှာပငျ ဧကရဲ့ကားကို ခွရောခံမိပွီး နီးစပျရာနယျမွရေဲစခနျးက နောကျက လိုကျတော့သညျ။
ဧက ကားမောငျးရငျး နောကျက ရဲကားသံမြားကွောငျ့ တဈခကျြလှညျ့ကွညျ့ကာ ပွုံးလိုကျသညျ။ ဟနျနီနှငျ့ နထှေကျခြိနျကွညျ့ရငျး ကျောဖီအတူသောကျရနျ ပွငျဆငျနစေဉျ မှနျခပျြမြားမှ တဈဆငျ့ ရဲကားမြားကို မွငျလိုကျသောကွောငျ့ အခြိနျမီ ရှောငျရှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော ရဲမြားက စောစီးစှာ သူ့ကို ခွရောခံမိပွီးသား ဖွဈနသေညျ။ ည ၁၂ နာရီထိုးနပွေီ ဖွဈသောကွောငျ့ လမျးပျေါတှငျ ကားမြားရှငျးနသေညျ။ ဧက ကားကို အရှိနျအမွငျ့ဆုံး တငျလိုကျသညျ။ ရဲကားမြားလညျး ထကျကွပျမကှာ လိုကျလာသညျ။ ဧက ကားကိုမွနျမွနျမောငျးပွီး ရဲမြားကို မကျြခွဖွေတျပဈရနျကွိုးစားသညျ။ လမျးလေးခှဆုံသညျ့နရောတှငျ ညာဘကျအရှိနျပွငျးပွငျးဖွတျအကှေ့ ယာဉျလမျးကွောခြျောသှားပွီး ဘေးဖကျမှ ပလကျဖောငျးကို အရှိနျနှငျ့ ဝငျတိုကျမိတော့သညျ။
ဧက ကားနောကျမှ ပါလာသော ရဲကားမြားက ဧကရဲ့ကားကို ဝိုငျးပွီး ရပျလိုကျကွသညျ။ ဧကရဲ့ကားရှပေို့ငျးတဈခုလုံး မှမှကွနေပွေီဖွဈသညျ။ ရှခေ့နျးတံခါးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျပွီး သှေးအလိမျးလိမျးဖွဈနသေော ဧကကို ဆှဲထုတျလိုကျပွီး ကားနောကျခနျးကို ကွညျ့လိုကျတော့ ဘယျသူမှမရှိဘဲရှငျးလငျးနသေညျ။ ကားနောကျဖုံးကို ဖှငျ့ကွညျ့တော့လညျး ဘာမှမရှိ။
“သူ ဒီကိုမလာခငျ ဟနျနီမကေို တဈနရောရာမှာ ဝှကျထားခဲ့တာဖွဈနိုငျတယျ။ ဧကသု ရဲ့ကှနျဒိုအနီးတဈဝိုကျကို သခြောပွနျစဈဆေးဖို့ ရဲအုပျကြျောစိုးကို သတငျးပို့ပါ ဧကသုကို လူနာတငျကားအမွနျဆုံးချေါပွီးဆေးရုံပို့ပါ”
ဧကသုကား accident ဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကားပျေါတှငျ ဟနျနီမပေါမလာကွောငျးသတငျးရတော့ ရဲအုပျကြျောစိုးတို့အဖှဲ့အလုပျရှုပျသှားပွနျသညျ။ ဧကသုနောကျကိုလိုကျနရေငျးမှကားပွနျလှညျ့ကာ ကှနျဒိုကိုပွနျသှားရသညျ။ ကှနျဒိုလုံခွုံရေးခနျးက CCTV မှတဈဆငျ့ ဧကသုနသေောအထပျက CCTV ကိုပွနျစဈကွညျ့လိုကျတော့ ဟနျနီမကေိုပှခြေီ့ပွီးထှကျလာကာ ဓာတျလှကေားနှငျ့အပျေါသို့တကျသှားပုံ အပျေါကနေ ဟနျနီမမေပါဘဲ တဈယောကျတညျး ကားပါကငျအထိ ဆငျးလာပုံတို့ကို တှလေို့ကျရသညျ။
“ဒါဆို ဟနျနီမကေ ဒီကှနျဒိုရဲ့ အပျေါဆုံးထပျမှာ ရှိလောကျတယျ သှားစို့”
ရဲအုပျကြျောစိုးနှငျ့အဖှဲ့က ကှနျဒိုရဲ့ အပျေါဆုံးကို ဓာတျလှကေားနှငျ့ အမွနျဆုံးတကျခဲ့သညျ။ ကှနျဒိုအပျေါဆုံးက တံခါးကို တှနျးဖှငျ့ဝငျလိုကျတော့ မွကျခငျးစိမျးလေးမြား ပနျးပငျလေးမြားဖွငျ့ ခေါငျမိုးထပျဥယြာဉျလေးကို တှရေ့သညျ။ ခေါငျမိုးထပျတှငျလူဖွနျ့ပွီးရှာလိုကျရာ ပနျးရုံနောကျဘကျတှငျ သတိလဈမမွေ့ောနသေော ဟနျနီမကေို တှရေ့ပွီး ဆေးရုံသို့ပို့ပေးလိုကျကွသညျ။
ဟနျနီ သတိပွနျရလာတော့ အခနျးထဲတှငျ မာမီ ယမုံနှငျ့ ဒေါကျတာဇှဲသဈတို့အပွငျ ရဲမြားပါ ရှိနသေညျ။
ဟနျနီ ခေါငျးကို အသာညိတျပွလိုကျသညျ။
“ကြှနျတျော ရဲအုပျကြျောစိုးပါ။ မဟနျနီမကေို မေးခှနျးလေး နညျးနညျးလောကျ မေးခှငျ့ပွုပါ”
ရဲအရာရှိက ဟနျနီနှငျ့ ဧက တို့ရဲ့ ပတျသကျမှုကို သခြောစဈမေးပွီးနောကျ…
“ကိုဧကသုက ကား accident ဖွဈပွီး ကြှနျတျောတို့ ဆေးရုံပို့ပေးထားတယျ မဟနျနီမေ သတိမရခငျ နာရီပိုငျးလောကျက သူသတိရလာလို့ ကြှနျတျောတို့ သူ့ကို စဈဆေးစရာရှိသမြှ စဈဆေးထားပါတယျ။ အသေးစိတျကို ဒီက ဒေါကျတာက ပွောပွပါလိမျ့မယျ”
“ဆရာတို့ရဲ့ စဈဆေးခကျြအရတော့ မောငျဧကသုမှာ စိတျရောဂါရှိကွောငျး ပျေါလှငျတယျ… ငယျစဉျကတညျးက ဖွဈခဲ့တဲ့ ဒဏျရာအသေးအမှားလေးတှကေ စုပွုံပွီး ပေါကျကှဲသှားတဲ့ သဘောပေါ့ သူ့မိဘတှကေ တဈခြိနျလုံး ရနျဖွဈတယျ။ အဲဒါတှကေို မွငျရတဲ့ ကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ဒီစိတျက ဝငျနတေယျ…အဲ့ဒီမှာ သူကိုယျတိုငျ ရညျးစားထားတဲ့အခြိနျကတြော့ အဲဒီမသိစိတျမှာ လှမျးမိုးနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေ သူကိုယျတိုငျတောငျ မသိလိုကျဘဲ သူ့ကိုစိုးမိုးနတော… တကယျတော့ သူက သမီးကို သိပျခဈြလို့ မှားသှားတာပါ သူ့အခဈြကို နညျးလမျးမှနျမှနျနဲ့ မပွေနိုငျခဲ့လို့ပေ့ါ… ဒီကိစ်စကို လကျရောကျမှုအနနေဲ့ အမှုဖှငျ့ထားတယျ.. ဒါပမေဲ့လညျး သူဟာ စိတျဝဒေနာရှငျတဈယောကျဖွဈနတေဲ့အတှကျ စိတျကနျြးမာရေးဆေးရုံကို အခုပို့ထားပါတယျ”
ဒေါကျတာက ရှညျလြားစှာ ရှငျးပွသှားသညျ။ ဟနျနီ့စိတျတှငျတော့ ကွားတဈခကျြ မကွားတဈခကျြ ဖွဈနခေဲ့သညျ။ စိတျရော၊ လူရော ပငျပနျးရသမြှ ဒီမြှနဲ့တငျ ပွီးပါစတေော့လို့သာ ဆုတောငျးနမေိတော့သညျ။
ဧက၏ စိတျအခွအေနေ အဆိုးရှားဆုံး ဖွဈလာသောကွောငျ့ စိတျကနျြးမာရေးဆေးရုံတှငျအပွီးထားလိုကျသညျ။ ဟနျနီ ဆေးရုံကဆငျးလာပွီးနောကျ ဒေါကျတာဇှဲသဈက ဟနျနီ့ဆီ မကွာခဏလာလညျသညျ။ ဟနျနီလညျး ကနျြးမာရေးကွောငျ့ အနုပညာအလုပျမြားကို အခြိနျအကနျ့အသတျမရှိ ရပျဆိုငျးထားလိုကျသညျ။
“ကောငျးပါတယျ ဒေါကျတာ.. နတေို့ငျး ဟနျနီ့ကို လာကွညျ့ရတာ အလုပျရှုပျနပွေီ”
“မရှုပျပါဘူး မမေ… ကြှနျတျောက ဒီလိုအခှငျ့အရေးရတာကိုပဲ ကနြေပျနတေဲ့သူပါ”
“မမေ… အခှငျ့အရေးယူတယျလို့ မထငျစခေငျြဘူး။ ဖြာခငျးတယျလို့လညျးမထငျစခေငျြပါဘူး… မမရေဲ့နှလုံးသားက တဈစုံတဈယောကျကိုခဈြဖို့မြား အဆငျသငျ့ဖွဈလာပွီဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့ကိုစဉျးစားပေးစခေငျြပါတယျ မမရေငျထဲမှာ နာကငျြခဲ့ရသမြှကို ကြှနျတျော ကုစားပေးပါရစေ”
“ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဒေါကျတာ… ဟနျနီ့ကို အစစအရာရာ ဂရုစိုကျပေးတဲ့အတှကျပါ… ဒါပမေဲ့ ဒေါကျတာရယျ စိတျတူ ကိုယျတူ ဝါသနာတူ ခဈြခဲ့ကွတဲ့လူခငျြးတောငျမှ နောကျဆုံးမှာ ဟနျနီ့စိတျရော ကိုယျရောကို ဒဏျရာတှေ ပေးခဲ့တယျ ဟနျနီ့နှလုံးသားက အမှတျကွီးတယျ ဒေါကျတာ….. နောကျထပျ ထပျမခဈြရဲတော့ဘူး ခဈြလညျး မခဈြခငျြတော့ပါဘူး ဟနျနီ အားနာပါတယျ”
ကြောခိုငျးပွီး အိမျထဲဝငျသှားသော ဟနျနီ့ကြောပွငျကို ဇှဲသဈငေးကွညျ့နမေိသညျ။ မမေ အခဈြက အစှမျးကုနျ ပှငျ့ဖူးပွီးမှ နှမျးကွသှေားတာပါ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အခဈြကတော့ ပှငျ့ဖူးခှငျ့လေးတောငျမရလိုကျဘဲ ခွှခေခြံလိုကျရတာ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောကတော့ မမကေို အမွဲစောငျ့နပေါ့မယျ။ မမေ ဘဝမှာ ဒဏျရာအနာတရတှကေို မလေ့ောကျပွီး အခဈြသဈတှေ ပွနျလညျမှေးဖှားလာနိုငျမယျ့နကေို့ စောငျ့နပေါ့မယျ မမေ။
အခဈြတှငျ အလငျးနှငျ့အမှောငျဟူ၍ နှဈခွမျးရှိသညျ။ သနျ့စငျနှေးထှေးသော ခဈြခွငျးမတ်ေတာရိပျအောကျတှငျ ခိုလှုံခှငျ့ရသူမြားသညျ အခဈြ၏ လငျးလကျသောဘကျခွမျးတှငျ နထေိုငျခှငျ့ရသူမြားဖွဈသညျ။ နာကငျြစကျဆုပျစရာမြား ပွညျ့နှကျနသေော အခဈြကှနျရကျတှငျ တှယျငွိမိသူမြားသညျ အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျးတှငျ ပိတျလှောငျခံထားရသူမြားသာဖွဈသညျ။
အခဈြ၏ နူးညံ့နှေးထှေးမှုမြားဖွငျ့ အစှမျးကုနျပှငျ့လနျးရနျ အားယူထားသော ဟနျနီမေ၏ အခဈြပနျးလေးသညျ ဧကသု၏ မတ်ေတာအဆိပျသငျ့မှုအောကျတှငျ ရစရာမရှိအောငျ ကွကှေဲပကျြသုဉျးခဲ့ရပွီဖွဈသညျ။ ဇှဲသဈ၏ အေးခမျြးသော မတ်ေတာဓာတျနှငျ့ အခဈြ၏ လငျးလကျတောကျပသောအခွမျးတှငျ ဟနျနီ၏အခဈြပနျးလေး နောကျတဈကွိမျဖူးပှငျ့ခှငျ့ရရနျ အခြိနျယူရပဦေးမညျ။
Tagged Dark, fiction, Fun, love, series
Posted on May 20, 2019 May 20, 2019 Author Christina Rosy
ခေါင်းကြောမာတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေက ဒီလိုလူမျိုးတွေပါ။
Posted on February 24, 2018 Author Wai Zin
တကယ်တော့ ခုချိန်မှာ အရမ်းကို အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသူတွေကလည်း ခေါင်းမာတတ်တဲ့ လူတွေပဲနော်..
Posted on December 21, 2017 Author Rin
ရာသီဥတုအေးအေးနဲ့ ခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရအောင်…….
Kim Bok-Joo လေး ပြောပြတဲ့ ဝင်းမွတ်ပြောင်လက်ပြီး glow နေတဲ့ အသားအရေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်